होली के हो र किन मनाईन्छ ? यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता - Birgunj Sanjalहोली के हो र किन मनाईन्छ ? यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता - Birgunj Sanjalहोली के हो र किन मनाईन्छ ? यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता - Birgunj Sanjal
होली के हो र किन मनाईन्छ ? यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता
२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०६:१८
बिरगंज । होली पर्व प्रत्येक वर्ष फागुन पूर्णिमाको दिन मनाईने एक रमाईलो पर्व हो । मानिसहरु आफ्नो काम धन्दा थाति राखेर तथा बिर्सिएर अबिर तथा रङ सँगै खुशी साटासाट गर्दछन् । होली किन मनाईन्छ यस विषयमा शास्त्रीय मान्यता जोडिएको छ ।त्रेता युगमा हिरण्य कश्यप नाम गरेको एक राक्षस थियो । उसको पुत्र प्रह्लाद विष्णु भक्त थिए । प्रह्लाद हरेक दिन भगवान विष्णुको पूजा तथा आराधना गर्दथे तर यो कुरा राक्षस हिरण्य कस्यपलाई मन परेको थिएन ।राक्षस हिरण्य कश्यपले आफ्नो छोरालाई बारम्बार सम्झायो तथा बिभिन्न किसिमको यातना पनि दियो तर प्रह्लादलाई भगवान विष्णुको कृपाले गर्दा केहि हुँदैन थियो ।भगवान विष्णुको नाम लिन तथा पूजा आराधना गर्न नछोडेपछि हिरण्य कश्यपले प्रह्लाद मार्नको निम्ती आफ्नी बहिनी होलीका लाई नियुक्ति गर्यो ।
होलीकालाई आगोले नजल्ने वरदान प्राप्त थियो । होलीकाले आफ्नो दाजु राक्षसको प्रह्लाद मार्ने ईच्छा पुरा गर्न प्रह्लादलाई लिएर आगोमा पसिन् । त्यहाँ दैवी चमत्कार भयो विष्णु भक्त प्रह्लादलाई केहि भएन उनी सकुसल भए तर होलीका आगोले जलेर भस्म भईन ।फागुन पूर्णिमा भन्दा एक दिन अगाडि अर्थात हिजो राति होलीका दहन गर्ने परम्परा रहेको छ । होलीका दहन गरिसकेपछि आज पानिमा रङ घोलेर एक अर्कालाई फाल्ने गरिन्छ ।हिरण्य कश्यपकी बहिनी होलिका दहन भई प्रह्लाद सुरक्षित भएकोमा खुसी भई ठूलो उत्सव गरियो । अविर जात्रा भयो, त्यहि समयबाट नै होली पर्वको शुरुवात हुन पुग्यो ।सत्यको पक्ष पोषक भक्त प्रह्लाद सकुशल रहेर असत्यको प्रतिक होलीका नाश भएको उत्सवमा भक्त प्रह्लादलाई सगुन खुवाएर, सिन्दुर,अविर दलेर, दूवो फूल छर्किएर महोत्सव मनाइयो ।त्यसै बेलादेखि यो उत्सव प्रत्यक वर्ष आजकै दिन मनाइदै आएको पाइन्छ । नेपालमा पनि हिमाली तथा पहाडी ईलाकामा आज र तराईमा भोलि होली खेल्ने चलन रहि आएको छ ।